इन्जिनहरूसँग समस्याहरू (#3, वा #3र 4)
प्रश्न इन्जिनहरूसँग समस्याहरू (#3, वा #3र 4)
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 14
1 वर्ष7महिना पहिले #851 by PAYSON
नमस्ते, म यहाँ देखि भएको छ एक लामो समय भएको छु। मलाई केहि समस्या छ। पहिलो, मैले कम्प्यूटर परिवर्तन गरे। त्यस पछि, केही मनपर्ने विमानहरू सबै सेतो छालाको साथ डाउनलोड गर्दै छन्। कुनै संरचनाहरू, कुनै इन्टरनेट (काकपिट वा अन्यथा)। कुनै साधन बिना उडान गर्न सकिँदैन। दोस्रो, म काम गर्न बहु सेटअपमा इन्जिनहरू लगाउन सक्दिन। मैले कुनै एकल वा दोहोरो इन्जिन प्रयोग गर्न सक्छु, तर 3rd वा 3rd राख्नुहोस्। र 4th, केवल दुई काम। म वास्तवमा देहाव्यान्ड ड्यास7उडान चाहन्छु, तर केवल बायाँ इन्जिनहरू अप्ठ्यारोमा छ।
1 वर्ष7महिना पहिले #852 by Dariussssss
हामीलाई धेरै जानकारी चाहिन्छ। कुन विमान, FSX संस्करण आदि ... के प्रश्नमा विमानले यो म्यानुअल छ, के तपाईंले यसलाई पछ्याउनु भयो र त्यस्ता ... यो मद्दतको लागि एकमात्र तरिका हो।
1 वर्ष7महिना पहिले #855 by PAYSON
जस्तो कि तपाईंले मेरो पहिलेको प्रतिक्रिया गुमाउनु भयो जस्तो देखिन्छ। म यो सम्पूर्ण पुस्तक र / वा "पढ्ने-म" द्वारा गर्छु। जहाँसम्म कुनै विशेष विमान, मैले सोधेँ कि मैले2इन्जिन भन्दा बढीसँग कुनै विमान पठाएको छु। म X-56 फ्लाइट नियन्त्रण एकत्रित गर्न सेट अप गर्न सक्छ, र त्यसपछि अर्को। प्रत्येक परिवर्तनले सबै बायाँ इन्जिनहरू वा सबै दायाँ इन्जिनहरूलाई निष्क्रियमा रहन प्रभाव पार्छ र अरूलाई थोरै असर पार्छ। म SFX भाप संस्करण प्रयोग गर्दैछु। मैले तपाईंलाई सम्पर्क गरे किनभने मेरो लामो समयको समस्या थियो र तपाईले मलाई सहयोग गर्नुभयो। यस परिस्थितिमा तपाईंको समय लिनको लागी माफी माफी माग्छ, केवल सोच्न सक्छ कि कसैले पनि यस्तै समस्या हुन सक्छ र यसलाई निको पार्छ। तपाईंको सोधिने प्रश्नको यो पनि केहि पनि छैन।
मेरो माफी र सादर, PAYSON
1 वर्ष6महिना पहिले #869 by PAYSON
म अन्य ठाउँमा प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।
1 वर्ष6महिना पहिले #870 by PAYSON
Whooooa !!! मैले 1 को माध्यम मा इन्जिन6को उपयोग को लागि समायोजन सेट गर्न को लागि सही तरीका मिलयो। यो धेरै सरल थियो। सहयोगको लागि धन्यबाद :-(
1 वर्ष6महिना पहिले #872 by Gh0stRider203
यदि अरूसँग यो समस्या छ भने साझेदारी गर्नुहोस्?
1 वर्ष6महिना पहिले #873 by PAYSON
मलाई धेरै जानकारी चाहिन्छ। कुन विमान, जो FSX संस्करण आदि ... के प्रश्नमा रहेको विमानले यो म्यानुअल छ, के तपाईंले यसलाई पछ्याउनुभयो र त्यस्ता ... यो मद्दतको लागि एकमात्र तरिका .OS, उडान नियन्त्रण प्रणाली, आदि।
1 वर्ष6महिना पहिले #874 by PAYSON
वास्तवमा, सबै जानकारी आवश्यक छैन। एक X-55 वा X-56 सेटिक उन्नत फ्लाइट नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्ति र सीमित 1 र2इन्जिन क्षमताओंको अनुभव गर्दैछ, मैले फेला पारेको मैले कस्तो उपचार गरेको छु। म यो पहिले पोस्ट गरेको थियो, तर यो केही एक्सटेन्सन गर्न सक्छ यो फिक्स 20 पटक यो मलाई काम गर्न प्रमाणित गर्न। यो काम गर्दछ। केवल "सेटिङहरू" खोल्नुहोस्, सेट अप थ्रोटलले जानुहोस्। सबै सेटिङहरू लिनुहोस्, जब थ्रोटटल सेटिङ् पूर्ण रूपमा चल्छ, र थ्रोटलले आफूलाई निष्क्रिय स्थानमा राख्नेछ (यसको मूल स्थितिमा लक पिन छोड्न निश्चित हुनुहोस्), थ्रोटलले सबै खुल्ला, पछाडि निष्क्रिय, फर्काउनुहोस्। विस्तृत खुल्ला, त्यसपछि ब्याक गर्न, सामान्य रूपमा क्यालिब्रेट गर्नुहोस्, बन्द सेटिङहरू, तपाईंको मनपर्ने4इन्जिन विमानमा जानुहोस् र यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। आशा छ कि यसले तपाईंको लागि काम गर्दछ जस्तै मेरो मेरो लागि।
1 वर्ष6महिना पहिले #875 by PAYSON
ओह, WWII जहाजहरु को एक युद्ध समूह छ र अष्ट्रेलिया को तट मा गायब गर्ने गायब हो (YBBN)।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.344 सेकेन्ड